EGWUREGWU NDỊ DỊ EGWU NA PC 2018 MAKA ỤMỤ AGBỌGHỌ: NCHỊKỌTA AKỤKỌ - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Egwuregwu kọmputa iri na-ewu ewu n'etiti ụmụ agbọghọ
Ọ bụghị nanị na ndị mmadụ ga-emeri ụwa kọmputa ma jupụta nkà! Ụmụ agbọghọ na-ahụkwa egwuregwu egwu, ihe ha na-ahọrọ na-adabakarị na mmiri dị omimi, ọrụ dị omimi na ọrụ mara mma nke ụdị dịgasị iche iche na afọ nke ntọhapụ. Kedu ihe egwuregwu kachasị egwu na PC na 2018 maka ụmụ agbọghọ kachasị mma? Anyị na-emepụta ọnụ ọgụgụ na-egosigharị na ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ịgba egwu na-ewu ewu, ya mere, anyị dị njikere ịkọrọ òkè anyị!
Bilie nke Tomb Raider
Ebe a na-etinye slime
Ụmụ agbọghọ na-enwe obi ụtọ na akụkọ mkpanaka nke nwa agbọghọ na-eto eto Max, bụ onye na-achọta ikike dị ịrịba ama ijikwa oge. Onye isi okwu a echeghi na iji nka a nwere ike iduga ya, ya mere, o gbaliri iji amamihe mee ihe n'omume di mkpa, ma obu izoputa ndu mmadu ma obu idozi nsogbu ndi ezinulo. Ndụ dị iche iche bụ egwuregwu dị egwu na-adọrọ mmasị na akụkọ na-adọrọ mmasị, ụdị egwuregwu, na ikuku nke ihe omimi na okwu ekwesighi, na ị gaghị achọ ikere òkè na nnukwu ụda olu ọbụna mgbe ị gafesịrị.
Max bụ nwa agbọghọ dị mma ma dị ụtọ nke tinyere ihe ọ bụla n'ihe ize ndụ iji zọpụta enyi ya bụ Chloe.
Otu n'ime egwuregwu kachasị egwu na PC maka ụmụ agbọghọ dị iche iche. Akụkụ nke anọ nke simulator ndụ dị egwu dịka ụmụ agbọghọ maka ọtụtụ ihe. Ndị na-emepe emepe mepee oghere ndị a na-enweghị atụ maka onye na-egwu ihe n'echiche banyere ịhọrọ uwe, imezi ihe mpụta, imepụta ime na ibi ndụ. Egwuregwu a nwere ike ijuanya na ọtụtụ ohere, n'ihi na n'ime ya, dị ka ezigbo ndụ, ị nwere ike ịhọrọ ọrụ ọ bụla, ihe omume ntụrụndụ, chọta ndị enyi ma daa ịhụnanya.
Sims dị ka ndụ dị adị, ma na njirimara nke aka ya: oge ​​na-efe efe ebe a ngwa ngwa, ọbụnakwa onye ụda mbụ nwere ike ịghọ onyeisi oche
Egwu egwuregwu a magburu onwe ya nke a ga-egwu ma naanị ya na enyi gị. Ị ga-edozi ọtụtụ mgbagwoju anya metụtara ohere, oge, physics na ndị ọzọ egwuregwuplay. N'okwu a, ị ga-achịkwa robot na-adọrọ mmasị, nke nwere ike igosipụta mmetụta uche, na-ekwurịta okwu site na mmegharị ahụ na onye ọkpụkpọ ọzọ, dozie ọnụ ụzọ maka ịkwagharị na ọkwa na nkọwa maka nkọwa dị mma maka ọnọdụ. Imeri nsogbu mgbagwoju anya na ngalaba gi bụ ohere buru ibu iji mara onye gị na ya dị mma ma, na ohere mbụ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma n'okpuru ya, na-emepụta ọpụpụ na-adịghị mma n'okpuru ụkwụ gị na-eduga na mmiri na-adịghị ahụ n'anya site na iji ígwè ọrụ.
Smart usoro nyochaa ihe ọ bụla i mere. Mgbe njedebe nke ozi ahụ, ọ ga-edo anya onye nwere tinker na onye gbalịrị idozi ihe mgbagwoju anya ahụ.
Otu n'ime ihe ndị a kacha mara amara nke egwuregwu kọmputa Lara Croft amasịghị ụmụ nwoke. Ụmụ agbọghọ ndị na-achịkwa onye na-eme njem obi ike na-ejikọta onwe ha na nwanyị a siri ike na nke onwe ya. Ọ bụ ya mere, ya na onye bụ isi, ọ dị mkpa ịnyefee ọtụtụ nsogbu, dozie nsogbu mgbagwoju anya, merie ndị iro n'ụzọ gị, n'ikpeazụ, banye na akụ dị oké ọnụ ahịa. N'ezie, ihe niile a ga-eme mara mma na adventurism.
Lara Croft bụ nwa agbọghọ nwere obi ike na onye mgbasa ozi dị ịrịba ama na ọtụtụ ụmụ agbọghọ chọrọ ịdị ka ya.
Ọzọ egwuregwu na PC nke ga-amasị ụmụ agbọghọ. Ọ bụrụ na ị hụrụ ihe okike, mgbe ahụ Cities: Skylines bụ ihe ị chọrọ n'ezie. Ndị na-eme ka ndị na-ahụ maka ọgba aghara ga-ewu obodo nrọ! Onye ọkpụkpọ ahụ nwere ohere sara mbara na ịhọrọ nhazi nke ebe, ụzọ, okporo ụzọ njem ọha na eze na usoro nke ọrụ mmadụ. Obodo ahụ ọ ga-enwe ọganihu ma baa ọgaranya ma ọ bụ ghọọ mpaghara obodo? Ihe niile ga-adabere na ọchịchọ na nkà na ụzụ nke onye nọ n'azụ nyocha!
Mee ka obodo gi ghara icho uzo siri ike, mana ka i kwusi n'egwuregwu - nka abughi oru di mfe
Ntugharị nke njem nke njem na-akpali akpali ga-adọrọ mmasị ikuku kpakpando site na nkeji mbụ. Egwuregwu ahụ na-atụ aro ka ị gafee mgbasa ozi akụkọ ahụ na atọ, ya mere jide n'aka na ị kpọbatara ndị enyi gị n'ụwa a mara mma jupụtara n'ihe ize ndụ na okwu ọjọọ! Onye ọ bụla n'ime ihe odide ndị ahụ nwere ọdịiche dị iche iche: Pontius bụ onye agha, dike na obi ike, Zoe bụ onye ohi, na-achịkwa nkịta ntan, ma Amadeus bụ onye maara ihe maara ihe nke nwere ikike telekinesis ma mepụta ihe na ọgwụ. Họrọ dike ọ bụla ma gaa njem!
Akụkọ akụkọ a na-abịa ndụ n'ihu gị
Ntị! Stardew Valley dị nnọọ ize ndụ maka oge gị n'efu! Egwuregwu a dị ka ebe na-adịghị njọ ma dị mfe, Otú ọ dị, n'eziokwu, ọ bụ ihe dị omimi nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Onye isi ihe a na-enweta akwụkwọ ozi si n'aka nna nna ya, bụ ebe ọ na-enweta ugbo n'akụkụ ndagwurugwu Stardew. Onye ọkpụkpọ ahụ gara ụlọ nna nna ya wee malite ịzụlite ya, n'otu oge ahụ ịmata ndị obodo na-adọrọ mmasị, onye nke ọ bụla nwere ihe nzuzo. Ka ọ dị ugbu a, ị ga-ejide azụ, na-eto eto ma na-azụ anụ ụlọ - ọrụ ndị ọrụ ọ bụla, ma ha bụ egwuregwu na-akpali akpali.
N'oge na-adịghị anya mgbe mmalite nke egwuregwu ahụ, ị ​​ga-enwe mmasị naanị n'ogo nke ọka toro n'ubi ahụ. Ọ dịghị ihe ọzọ
Akụkụ nke abụọ nke ịchọrọ egwu Syberia dị egwu bụ egwuregwu dị ukwuu maka ndị chọrọ ịtụgharị uche, nyochaa egwuregwu egwuregwu, ikarịta ụka na ihe ndị na-adọrọ adọrọ ma kpughee ihe omimi. Ọrụ ahụ na-enye onye ọkpụkpọ ahụ aka ijide Kate Walker, bụ onye gara ala ndị dị n'ebe ugwu na-achọ ebe obibi anụ. Ị na-atụ anya mgbagwoju anya mgbagwoju anya, ndị na-adọrọ mmasị na ndị charismatic na ọtụtụ ihe egwuregwu ị ga-eji mee ihe.
Ọkachamara nke afọ na-adọta mmasị nke ọtụtụ ndị na-ama ụdị ụdị njem ahụ
Onye na-egwu egwu na-ewu ewu na-agbakọta ọ bụghị nanị ndị nwoke na-ege ntị na cybersports, kamakwa ọ kpaliri ọtụtụ ndị gamers, ndị na-enye headshots na ndị na-emekọ ihe ọnụ na ndị egwuregwu MOV oge niile. Na nchịkọta cyber nke Overwatch, egwuregwu ndị na-agba ọsọ zuru oke na òkè nke ụmụ nwanyị na-amalite ugbu a, ụfọdụ ndị na-eme egwuregwu na-egosikwa egwuregwu dị oke mma na ndị na-achọpụta ihe.
Ụmụ agbọghọ ka na-egosi nkà ha na Overwatch. Eledala ha anya
Ọ bụrụ na ị chọsiri ike ịmalite ugbo, mgbe ahụ, Slime Ranch ga-enyere gị aka na nke a. N'eziokwu, ọ bụghị kukumba na poteto ga-etolite n'ebe a, mana mpekere ndị dị mma, ụfọdụ ụdị osisi jelii, nke ọtụtụ ụdị ụmụ mmadụ gbara alụkwaghịm. A na-ekwe ka ọkpụkpọ ahụ gafere ha iji nweta akara ngosi na-atụghị anya ya, ma ọ bụghị njikọ niile na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ọ ga-abụ na nwa ọhụrụ ga-abụ ezigbo anụ ọkụ n'obi nke ga-enwe obi ụtọ iri ndị ọzọ bi n'ubi gị, ya mere, gee ntị gị.
Ihe kachasị mkpa bụ na ọ bụghị agụụ na-agụba ndị nwamba na-bọọlụ jelị a ma na-amụmụ ọnụ ọchị
Ụmụ agbọghọ na-enwe mmasị na egwuregwu kọmputa ọbụlagodi ụmụ okorobịa, nhọrọ nke oke ọkara nke mmadụ na-adabere na egwuregwu na-akpali akpali nke ụdị dịgasị iche iche, gụnyere simulators, egwuregwu MOVA, nchụso na egwuregwu ndị njem.